UNSOM & AMISOM oo walaacsan dagalka Shabeellaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Nicholas Kay ayaa walaac ka muujiyay dagaal beeleed ka socda gobolka Shabeellaha hoose oo sababay dhibaato soo gaartay dad rayid ah.
Danjiraha ayaa ku taliyay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda, isagoo dhinacyada dagaallamaya ujeediyay inay khilaafkooda ku xalliyaan wadahadal, nabad iyo isu-tanaasul.
Wuxuu soo dhoweeyay dedaalka uu sameeyay raysul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ee xalka loogu raadinayo xasaradda taagan.
Danjire Nicholas Kay ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah ay soo dhibtoodeen in ku filan, isla markaana ay og yihiin in aanay wax wanaag ah ka imaaneyn colaad hor leh oo hadda la galo.
Wuxuu xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato dedaal kasta oo xal loogu raadinayo colaaddaas.
Dhanka kale, wakiilka Midowga Afrika ee Somalia, danjire Maxamed Saalax Annadif ayaa isna warsaxaafadeed uu soo saaray ku muujiyay walaaciisa colaadda gobolka Shabeellada Hoose ka socota, wuxuuna ugu baaqay dhinacyada inay si deg-deg ah u joojiyaan gacan ka hadalka.
“Waxaan ku baaqayaa deggenaansho iyo dib u heshiisiin. Xaaladda laguma xallin karo gacan ka hadal. Dinacyada oo dhan waa inay ka joogsaaan falalka gacan ka hadalka ah, sameeyaanna dadaallo toos ah oo ay uga gudbayaan xaaladdaas kuna xalliyaan farqiga u dhexeeya wada-hadal nabadeed iyo xal waara,” ayuu yiri Annadif.
Danjire Annadif wuxuu ku cel-celiyay ballan-qaadka AMISOM ee ah inay si aad u dhow ay ula shaqeyn doonto dowladda federaalka Soomaaliya iyo xoogageeda si loo xasiliyo dalka ammaanna looga dhigi lahaa.
“AMISOM oo la tashaneyso bulshada caalamka waxay u joogtaa inay ku taakuleyso dhammaan dhinacyada sidii loo heli lahaa is fahan buuxo taasoo qayb ka ah qorshe ay sare ugu qaadayso nabada, amaanka iyo xasilloonida Soomaaliya,” ayuu isna ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa.
Dagaalladii habeen hore ee shalay ka dhacay Marko iyo Lambar 50 ayaa sababay in meelahaas lagala wareego maleeshiyaadkii horay u joogay, waxaana boqolaal qof megengelyo u galeen xerooyinka ciidamada AMISOM ku leeyihiin Shabeellaha Hoose.
Fiidow: Shiico mintid ah ayaa jooga Galgaduud